Cali Xuseen Cali oo La Beeniyay in uu Kamid yahay Daacish | Baydhabo Online
Cali Xuseen Cali oo La Beeniyay in uu Kamid yahay Daacish
Nabadoon Axmed Xuseen oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa sheegay in Cali Xuseen Cali uu yahay ganacsade Soomaaliyeed, isla markaana si sharci daro ah loogu heysto dalka Kenya.
Nabadoon Axmed Xuseen ayaa beeniyay wararka sheegaya in Ganacsade Cali Xuseen Cali uu ku lug lee yahay eedeeymo loo soo jeediyay oo ahaa in uu ka tirsan yahay kooxaha Argagixisada ah.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in Cali Xuseen Cali uu yahay Nin ganacsigiisu ku baahan dhulka Soomaalida, si weyna loo yahqaan isla markaana la doonayo in hantidiisa lagu baneysoto eedeeymo aan sal iyo raad toona la heyn sida uu hadalka u dhigay.
Nabadoon Axmed Xuseen ayaa ka codsaday dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Kenya in arrintaasi ay wax ka qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan, madaama uusan Ganacsade Cali Xuseen ka mid aheyn kooxaha lagu eedeeynayo.
Dhawaan ayaa Ciidamada Kenya waxay gobolka Waqooyi bari Kenya ku xireen ganacsade Cali Xuseen Cali oo ay sheegeen in uu xiriir la leeyhay kooxda Daacish, isla markaana uu la shaqeeyo kooxaha wax tahriibiya.
Hase ahaatee, dadka yaqaan ayaa ku doodaya in Cali Xuseen Cali uu san kamid ahayn kooxaha Argagixisada ah, isla markaana dad gaar ah ay ku bartilmaamedsanayaan eedeenta loo soo jeediyay.